I-Samsung Galaxy A9 (2018) iya kufika ineekhamera ezine zangasemva | I-Androidsis
Ukuvuza okutsha kuqinisekisa ukuba i-Samsung Galaxy A9 (2018) inokuza neekhamera ezine zangemva
Ngomso, Okthobha 11, I-Samsung Galaxy A9 (2018), enokubizwa ngokuba zii-Galaxy A9s kwezinye iimarike, inokutyhilwa, kwaye ayizukubaneekhamera ezingaphantsi kwesine ngasemva, njengoko bekulindelwe kwaye ivuza mva nje. Ukuba oku kuzalisekisiwe, indlu yoMzantsi Korea iya kuba yinkampani yokuqala ehlabathini ukuzisa i-terminal ngeli nani leekhamera zangemva.
Ndiyabulela ukuvuza okutsha okwenziwe nguM @MSSmartPrice, omnye umfanekiso wesi sixhobo uvele, apho Imodyuli engasemva yemifanekiso ene-sensors ezine ziqinisekisiweKe ngoko, ngolunye usuku emva kokuboniswa kwayo, oku kunokwenzeka kuyaqhubeka ukomelela.
Umfanekiso ongezantsi ucebisa ukuba Iphaneli yangasemva yeGalaxy A9 iya kwenziwa ngeglasi. Iglasi ibuyela ngasemva kwisakhelo sefowuni yealuminium. I-rocker yevolumu kunye neqhosha le-Bixby zihlala kwelinye lamaphethelo efowuni.
Njengoko siqaphela, Iskena sokuprinta iminwe esikwere sikhona kumqolo ophakathi, idiagonal kwinkqubo yokufota, ehambelana ngokuthe nkqo kwaye eyenza ukukhanya kwe-LED emazantsi.
Ngaphambili i-leaker eyaziwayo U-Evan Blass wabelane ngedatha etyhila inkcazo yento nganye engasemva. Eyokuqala zii-megapixels ezi-8 ezine-f / 2.4 aperture kunye ne-120-degree degree of view. Okulandelayo yimayile yefowuni ye-megapixel ye-10 nge-2x zoom zoom kunye ne-f / 2.4 ukuvula. Inzwa yesithathu yeyona sensor iphambili ye-24-megapixel ngeferture f / 1.7, exhotyiswe ngetekhnoloji "yokuCacisa nokuKhanya". Le nzwa iya kudlala indima ephambili ekubambeni izibhengezo ezingcono zokukhanya. Le yokugqibela yikhamera enzulu ye-5 megapixel enefert / f. 2.2. Ngokubanzi, imodyuli iya kuthwala inkxaso kwi "Live Focus" function.
Qalisa: I-Galaxy A9 Star kunye ne-Galaxy S9 Star Lite: Uluhlu oluphakathi lwe-Samsung
Iingxelo zamva nje zidize oko I-Galaxy A9 iza kufika ine-6.3-intshi S-AMOLED isikrini, eya kuvelisa isisombululo se-FHD +. I-Samsung ye-18.5: 9 infinity design iya kufumaneka kwi-smartphone. Ukongeza, bacebisa ukuba inikwe amandla yi-chipset ye-Snapdragon 660 kunye ne-6 GB ye-RAM kunye nendawo yokugcina yangaphakathi ye-64 okanye i-128 GB -nokwandiswa nge-MicroSD-. Okokugqibela, iya kuba nekhamera engaphambili engama-24-megapixel, ibhetri yomthamo eyi-3.720 mAh, ibhendi-mbini 802.11 a / b / g / n uqhagamshelo lweWiFi, iBluetooth 4.2 LE kunye kunokwenzeka ukuba ifike nge-Android 8.1 Oreo yokusebenza kwenkqubo phantsi kwe-Samsung yamava e-UX.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Ukuvuza okutsha kuqinisekisa ukuba i-Samsung Galaxy A9 (2018) inokuza neekhamera ezine zangemva
IHuawei ibhengeza ibhetri ye-lithium-silicon yokuhamba kwayo ngokuhamba kunye nophuculo lokutshaja okukhawulezayo
I-Badland Brawl ibonelela ngezinto ezininzi ze-physics kunye nokungqubana njengeClash Royale